Yonke intombazane nowesifazane, kungakhathaliseki ubudala, bafuna ukushada. Inkinga yokuqala ukuthola indoda efanele kumndeni. Ngokuba obani abesabekayo ukushada akufanele, futhi lowo omelela kuye, kunzima kakhulu ukuthola.
Inkinga yesibili ukugcina umshado. Futhi hhayi nje ukusindisa, kodwa ujabule emshadweni. Indlela yokugcina inhlonipho, uthando kanye nesifiso emshadweni? Ake sithi usuvele unamalungu omyeni, noma nje usanda kuhlala ndawonye, ​​uvumele ubuhlobo bakho. Udinga kanjani ukulandela imithetho ukuze ubudlelwane emndenini bukhule ngokwengeziwe ngokuhamba kwesikhathi, futhi umshado wakho ube umshado ojabulisayo?
Isimo sengqondo "Sabantu abadala" ekulawuleni imizwelo - ukulawula nokwazisa
Eqinisweni, konke kulula. Kubaluleke kakhulu ukuthi owesifazane afunde ukulawula imizwelo yakhe, ngakho-ke noma yisiphi isitatimende somyeni wakhe esivamile singabonakali maqondana nomuntu wakhe. Uma ungafundi lokhu, kuzodingeka uzizwe uhlambalazwa ngaso sonke isikhathi, futhi lokhu ngeke kwengeze enjabulweni yakho. Ngaphambi kokuba wazi impendulo yombuzo wokuthi ungayigcina kanjani inhlonipho, uthando nokuthandana emshadweni, zibuke wena futhi uqaphele ukuthi iziphi - "zakho" amaphele, futhi lapho kuthiwa khona ngempela.
Kubaluleke kakhulu ukuvumela lo muntu uzizwe engumnikazi waleso simo, inhloko yomndeni, ngakho-ke akufanele neze enze izinqumo ezizimele, noma ngabe unesenzo esicacile sokusebenza. Nikeza ilungelo lokwenza izinqumo kumyeni wakho, futhi uma ungowesifazane ohlakaniphile, mholela esinqumweni esifanele, kodwa ukuze indoda izwe ngokuphakama kwithuba lokuhola umndeni. Lokhu ngeke nje kusize ukugcina inhlonipho ngothando kanye nesifiso emshadweni, kodwa futhi kuyomnika amandla okuqhubeka nokwenza izinqumo ezibalulekile ngomndeni. Uzodinga kuphela ukumqondisa kulezi zinqumo ezihlakaniphile, futhi lokhu kuyoba impendulo ewukuphela kombuzo emayelana nendlela yokugcina inhlonipho, uthando kanye nesifiso emshadweni.
Uma uzithatha isinqumo sezinkinga zomndeni wonke, maduzane uzobona ukuthi umyeni wakho uyeke ukuba nesithakazelo ezindabeni zomndeni nhlobo - futhi ngaphandle kwakhe konke kwaphekwa, futhi futhi walahlekelwa yinzalo kuye njengelungu elibalulekile lomndeni. Kubalulekile ukuba sikwazi ukukhulisa indoda kumuntu, ukuze angesabi ukuthatha nokuthatha umthwalo womndeni.
Umbuzo obaluleke kakhulu - uma ushada, uhloniphe umyeni wakho? Ngicabanga ukuthi impendulo izoba yinto enhle kuphela. Uhlobo luni lomfazi oluyoshada nendoda engayihloniphi? Khona-ke kungani emkhakheni wokuphila komndeni ngokuvamile kwenzeka ukuthi umyeni uyeke ukubhekwa njengomuntu ophawulekayo emndenini, amenze amangala, ahlukumeze, amshiye ucansi, okuyisikhombisa ukuthi lowo muntu akahlonishwa? Ngabe owesifazane angase ajabule, agcine inhlonipho, uthando kanye nesifiso emshadweni, uma engahloniphi umyeni wakhe njengendoda, umthengi, umlingani? Kulula. Ukuthobeka komyeni wakhe, uyazihlazisa kuqala. Ubani ongabekwa icala, ukuthi awukwazi ukunikeza umyeni wakho lutho ngaphandle kokuhlambalaza? Khumbula, konke okwenzela umyeni wakho, owunika umndeni wakho, lokhu kungumnikelo wakho kumgcinimafa womndeni wakho wenjabulo. Funda ukunika umyeni wakho uthando nokukhathalela, futhi uzokuphendula okufanayo.
Kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu uzizwe evikelekile ngumndeni wakhe. Ungamphoqeleli umuntu ukuba enze okuthile, futhi amhlambalaze ngenxa yokungasebenzi. Udinga nje ukumbonisa ubuthakathaka bakho, lokho okudingayo ngempela kuye, kuwukuye, hhayi ngosizo lwakhe. Indoda isimo sengqondo esinjalo siyimvuselela! Ngesinye isikhathi ungabonisa amandla akho kumuntu, ikakhulukazi njengoba unamandla kunabo. Indoda ayikwazi ukumelana nokuphikisana okunjalo futhi ushiye umndeni. Ngokwemvelo ungumvikeli, futhi wena, umkakhe, kufanele ube ngaphansi kwesivikelo sakhe, ngoba sibuthakathaka futhi siyidinga.
Lezi zindaba zikuvumela ukuba ugcine inhlonipho yomuntu ngokwakhe, futhi uthande, ukushisekela emshadweni. Kuyoba kuhle kakhulu uma wazi ngezinto ezithandwa ngumyeni wakho, izinto ezithandwayo nokuzilibazisa. Futhi hhayi nje ukwazi, kodwa ukuba nesithakazelo kulolu cala lokuphila kwakhe. Uma kungenjalo, uzocabangela ukuthi awunandaba naye, ngoba ukuzijabulisa kwakhe ukuqhubeka kwakhe. Wena, nomkakhe, naye uqhubeka naye.
Njengoba kunikezwe lokhu, kufanele kukhunjulwe ukuthi akekho umuntu odinga ukuqhubeka nokubi kwakhe, ngakho-ke umfazi ohlazola uzama ukukhipha umklomelo odlwengulayo.
Ukuphathwa kabi - ukudla nokulala
Indoda yakhe akudingeki ukuthi ithande kuphela, kodwa futhi iyakuthanda, iphathelene nomsebenzi wendlu. Mayelana nobulili, awukwazi ukuphuca umyeni wakho wezocansi kunoma yiziphi izimo. Lena yindlela kuphela yokugcina inhlonipho, ukuvumelana, uthando kanye nesifiso emshadweni - ngaphandle kokuwasebenzisa!
Indoda akufanele izizwe ivinjelwe kule ndaba. Kuye, ubulili bubaluleke kakhulu! Futhi uma uzoqondisa izenzo zakhe ngocansi, khona-ke esikhundleni sokulondoloza uthando nenhlonipho, uzobabeka engozini. Ngikholelwa, indoda eqhubekile ngokuphelelwa yithemba, ngokushesha uthole isifiso ohlangothini, ukuze uhlale uzimele kule nkinga. Kungcono ukunamathela esimweni sokunqanda umyeni wakho wesondo, uyazivimbela ucansi futhi uqobo lwakho, okusho ukuthi wenza okubi kakhulu emndenini wakho wonke.
Singakwenza ngaphandle kweseluleko?
Ngokushesha noma kamuva, umndeni wakho uzoba nezingane. Umthwalo womabili wena nomyeni wakho uyokwandisa izikhathi eziningana. Menze abe nomuzwa wokuthi uyabona futhi uyakwazisa ukukhathazeka kwakhe ngawe, indoda kufanele uzizwe eyinqobe, lokhu kuphela kuyomnika amandla. Indoda kufanele iqhaza ekukhuliseni izingane, futhi akufanele uphazamise. Indoda akufanele inikeze iseluleko, ingamhlazisa.
Ukunikeza iseluleko kufanele kube ilungelo lomyeni, njengenhloko yomndeni kanye nommeli wakho. Kubaluleke kakhulu ukuthi ukwazi ukukhuluma nomyeni wakho, inkhulumomphendvulwano iyinjini yomndeni wakho ngenhlalakahle.
Ungesabi izingxabano, unganqikazi ukucela intethelelo futhi ungesabi ukuthela - konke lokhu kunomthelela ekuthuthukiseni ubuhlobo. Musa ukudidanisa ukuxabana nalesi sikhalazo. Ingxabano iyinkhulumomphendvulwano enenzuzo phakathi kwabantu ababili abanengqondo ngenjongo yokwenza isinqumo esivamile, okuvumela ukugcina inhlonipho, uthando kanye nesifiso kunoma imuphi umshado.
Sakhetha, futhi asikhethi thina!
Ngokomuntu, ngiyakholwa, futhi akuyona nje imibono yami ukuthi akusiyo amadoda asikhethayo, kodwa thina besifazane sikhetha amadoda ethu futhi sikhethe umyeni wethu. Owesifazane kufanele abe ohlakaniphile, akumangazi ukuthi owesifazane ubelokhu ebhekwa njengomgcini wekhaya. Owesifazane kuphela okwazi ukudala emndenini ncamashi umkhathi adingekayo ukuze azizwe ngomyeni wakhe njengodonga lwamatshe futhi ajabule emshadweni.
Indlela yokuphonsa umfana ngaphandle kwezinyembezi?
Ukwazi unyaka omusha
Imithetho yokugcina ubudlelwane obuhle bomndeni
Indlela yokugcina umndeni uqine futhi unobungane
Abazalwane bakaMaladze babatshela ngokucacile mayelana nokuhlangenwe nakho kwabo uthando
I-spaghetti ene-meatballs ne-sauce
U-Ihor Nikolaev noJulia Proskuryakova babikezelwa ukuthi babe nendodakazi
I-Horoscope ka-2010 ngezinhlanzi ezizalwa ngonyaka we-tiger
Indlela yokuhlobisa ingaphakathi lekhishi elincane: amathiphu okuklama
Ukucindezeleka kuthinta ubulili